Sakafo Sakafo Fisaorana Vaovao Namboarina avy ao amin'ny White Castle
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Sakafo Sakafo Fisaorana Vaovao Namboarina avy ao amin'ny White Castle
White Castle dia manandratra ny Thanksgiving amin'ity taona ity miaraka amin'ny fomba fanamboarana famenoana vaovao roa, ary ny iray naseho manokana tao amin'ny OnlyFans. Ny Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing sy ny Southwest Jalapeño Cheese Slider Stuffing, ny fiovaovana farany amin'ny fomba famenoana voalohany an'ny White Castle, dia azo antoka fa hanampy hafanana amin'ny latabatra fisakafoanana. Ity Thanksgiving ity dia manamarika ny tsingerintaona faha-30 tamin'ny famoahana ny resadresaka voalohany tamin'ny 1991.
Araka ny hevitr'izy ireo, ny dikan-teny roa amin'ny famenoana dia mampiasa ny Jalapeño Cheese Slider masiaka White Castle ho toy ny singa fototra.
“Hafana kokoa ny fotoam-pialan-tsasatra satria tena mahamay tokoa ireo fomba fanamboarana ireo”, hoy i Jamie Richardson, filoha lefitry ny White Castle. "Ny Jalapeño Cheese Slider anay dia singa malaza amin'ny trano fisakafoananay sy amin'ny lalantsara amin'ny frizidera, noho izany dia fantatray fa ho tian'ny Cravers anay ireo fomba fanamboarana vaovao mafana sy masiaka ireo."
White Castle dia niara-niasa tamin'ny mpamono afo sy chef monina any Florida mba hanampy amin'ny famoahana ny teny momba ny fomba fanamboarana vaovao. Manny Washington Jr., lehiben'ny distrika ao amin'ny Departemantan'ny Afo ao Orlando ary olo-malaza malaza amin'ny media sosialy, dia hampiseho amin'ny mpankafy ny fomba fanaovana ny Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing, izay ahitana sombin-kena, dipoavatra jalapeno voatetika, seleria, cilantro, komina ary voatetika. fromazy poivre jack, mitambatra avokoa izy rehetra mba hamorona tsiro mafana sy masiaka. Hivoaka ao amin'ny fantsona YouTube an'ny White Castle sy ny kaonty Facebook, Twitter ary Instagram ny votoatiny.
Ary mampiseho ny lafiny masiaka, White Castle dia mampiditra ny Southwest Jalapeño Cheese Slider Stuffing mafana kokoa sy masiaka ao amin'ny OnlyFans ihany, ilay sehatra media sosialy mifototra amin'ny famandrihana misy mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 180 tapitrisa ary mpamorona mihoatra ny 2 tapitrisa manerantany. Ity dikan-teny ity dia mitondra ny hafanana ho amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fampidirana jalapeño sy poblano dipoavatra fanampiny nefa mbola manasongadina ny tsiron-tsakafo mahazatra fantatrao sy tianao. Ny mpankafy White Castle dia afaka mijery ny fomba fanamboarana manokana amin'ny mombamomba ny OnlyFans vaovao.
"Ny zavatra lehibe momba ny dikan-teny Bacon sy Southwest amin'ny Jalapeño Cheese Slider Stuffing dia ny ahafahanao manao na iray ho mafana sy masiaka araka izay tianao," hoy Richardson. "Ireo dia sakafo tsy maintsy ananana amin'ny fankalazana ny Thanksgiving sy Friendsgiving."
Ho famenoana an'ireo fomba famenoana mafana sy vaovao ireo, White Castle dia manao fivarotana afo amin'ny andiany faha-100 taonany "Cravey Boat." Azo alaina ao amin'ny trano fivarotana fanomezana an-tserasera White Castle's House of Crave, ny Cravey Boat dia tonga lafatra amin'ny gravy, fondue, hollandaise ary saosy hafa. Tsy misy afa-tsy $15.
Ankoatra izany, White Castle dia manome Castle Combo #1-#6 maimaim-poana na Combo sakafo maraina maimaim-poana ho an'ny mpamono afo rehetra miasa amin'ny Thanksgiving. Tsy ilaina ny tapakila na fividianana, na dia angatahina ny mpamono afo mba hampiseho ny mombamomba azy ary tonga alohan'ny tolakandro satria maro ny trano fisakafoanana mihidy aloha amin'ny fialantsasatra.
Tonga ho an'ny faha-30 taonan'ny The Original Slider® Stuffing recipe ireo fomba fanamboarana vaovao mora nefa matsiro. Nipoitra tamin'ny 1991 ny fomba fanamboarana, raha nanatsara ny fomba famenoana ny fianakavian'ny renibeny tamin'ny kitapo misy Sliders ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa White Castle. Nanomboka teo, ny famenoana malaza mifototra amin'ny Slider dia nanjary tsy fomban-drazana Thanksgiving fotsiny, fa koa fanampim-panampiana amin'ny sakafo hariva mandritra ny taona ho an'ny fianakaviana Craver manerana an'i Etazonia.
Tamin'ny taona 2019, ny fianakaviana manana sakafo haingana sy entana entana entana mpanjifa dia nampiditra dikan-teny nohavaozina kely amin'ny fomba fanamboarana Slider Stuffing Original mba hanintona ireo vegans sy vegans. Amin'ny fampiasana ny Impossible ™ Slider ho singa fototra, ny White Castle Impossible ™ Slider Stuffing dia nanome fahafahana ireo tsy mpihinana hankafy ny tsiron'ny rehetra.
White Castle Cravers dia afaka mividy ny Original Sliders sy Jalapeño Cheese Sliders ao amin'ny fizarana vata fampangatsiahana any amin'ny fivarotana entam-barotra manerana ny firenena. Original Sliders, Jalapeño Cheese Sliders ary Impossible™ Sliders dia azo vidiana amin'ny trano fisakafoanana White Castle. Ny fomba famenoana dia omena etsy ambany. Raha mila hevitra momba ny fomba fanamboarana tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny sakafo White Castle dia tsidiho ny www.whitecastle.com/food/recipes.
Ny karazan-tsakafo isan-karazany ao amin'ny White Castle dia hanintona ireo karazan-tsakafo Craver. Recipe famenoana telo no voatanisa etsy ambany. Ny fomba fahaefatra - ary mafana indrindra - dia azo alaina ao amin'ny OnlyFansprofile an'ny White Castle.
Fotoana fanomanana: 20 minitra
Fotoana mahandro: 45 hatramin'ny 50 minitra
Fanompoana: 4 hatramin'ny 6
2. Dibera 10 sotrokely
3. 1 kaopy seleria, voatetika
4. Poivre jalapeno 1, voatetika madinika
5. Bacon 10 silaka, masaka ary tetehina (tokony ho 1¼ kaopy)
6. 1 sotrokely sira
7. ½ sotrokely dipoavatra
8. 1½ sotrokely komina
9. ¼ kaopy cilantro, voatetika
10. ¾ kaopy turkey na ron-kena akoho
11. 2 atody
12. 1 kaopy voatetika poivre jack fromazy
1. Arotsaka ao anaty vilany lehibe ny dibera amin'ny hafanana midadasika. Asio seleria voatetika sy poivre jalapeno ary andrahoy mandra-pahalemy.
2. Heat Sliders araka ny toromarika fonosana. Tapaho efatra.
3. Ao anaty vilia lehibe iray na vilany, afangaro ny Sliders efa notetehina miaraka amin'ny hena voatetika, sira, dipoavatra ary komina. Afangaro ny cilantro sy ny legioma avy amin'ny vilany. Raha mahandro ny entana ao anaty vorontsiloza dia ampio ny fromazy poivre jack eto ihany koa.
4. Afangaro ao anaty vilia kely ny ron-kena sy ny atody. Araraka amin'ny fangaro fangaro dia kobanina mandra-pizarana.
5. Apetraho ao anaty lovia fanaova 9×13 ny fangaro famenoana ary asiana fromazy poivre jack.
6. Mofomamy amin'ny 350 degre mandritra ny 30 minitra sarona. Avy eo, esory ny sarona ary tohizo ny fandrahoan-tsakafo mandra-pahavoky ny tampony, eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra fanampiny.
Fotoana fanomanana: 5 ka hatramin'ny 10 minitra
Cook time: 35 minitra
Servings: kaopy 9 eo ho eo (ampy ho an'ny vorontsiloza 10 ka hatramin'ny 12 kilao)
1. 10 hatramin'ny 12 White Castle Original Sliders, tsy misy pickles (avy amin'ny trano fisakafoanana Castle na mpivarotra eo an-toerana)
2. 1½ kaopy voatetika seleria
3. 1¼ sotrokely voatoto
4. 1½ teaspoon sage voatoto
5. ¾ sotrokely dipoavatra mainty nototoina
6. ¼ sotro akoho (na 1 kaopy ho an'ny version casserole)
1. Tetehina madinika ny Sliders ary arotsaka ao anaty vilia lehibe fangaro.
2. Asio seleria voatetika sy zava-manitra.
3. Ampio ¼ kaopy ny ron-kena akoho ary afangaro tsara.
4. Apetraho ao anaty lavaky ny vorontsiloza ny koba ary andrahoy araka ny fanao mahazatra.
5. Raha mahandro sakafo toy ny casserole dia asiana ¾ kaopy ny ron-kena akoho ary atsipazo tsara.
6. Tifirina na menaka ny lovia 2 litatra.
7. Afindrao amin'ny lovia casserole ny entana ary alao amin'ny 350 degre mandritra ny 35 minitra.
Fandrahoan-tsakafo: manodidina ny 9 kaopy famenoana
1. 10 White Castle® Impossible ™ Sliders, tsy misy pickles
6. 1 kaopy legioma ron-kena
1. Rovitra ny Impossible ™ Sliders ho tapatapaka ary apetraho ao anaty vilia baolina lehibe.
3. Ampio ranom-boankazo 1 kaopy ary atsipazo tsara; avelao hipetraka mandritra ny 10 minitra ny akora mba hitroka.
4. Tifirina na menaka ny lovia 2 litatra.
5. Afindrao amin'ny lovia casserole ny entana ary alao amin'ny 350 degre mandritra ny 35 minitra.